Akụkọ - NDAA kwadoro igwefoto mbugharị
IP Mbugharị Igwefoto Igwefoto
4K Mbugharị Modul
4MP Mbugharị modul
2MP Mbugharị modul
Digital Block Igwefoto Igwefoto
Module Igwefoto Drone Zoom
Modulu Sensọ abụọ
Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe
Dual ihe mmetụta thermal modul
1280 Module Igwe
640 Igwe Igwe
384 Igwe ihe eji edozi
Igwe foto Drone Gimbal
4K Mbido Gimbals
Igwe foto PTZ
Bi-ụdịdị dị iche iche n'ọnọdu Systems
Dome PTZ ese foto
NDAA na-agbaso igwefoto mgbochi mbugharị
Ele Sheen nwere ike inye NDAA ese foto na mbugharị mbugharị.
Ele Sheen Mstar mbugharị ese foto na-akwado 100% NDAA.
Ọ bụrụ na ị nụla banyere ndepụta aha ojii nke USA maka ngwaahịa dịka Hikvision, Dahua na Huawei, mgbe ahụ ị nwere ike ịtụle ileba anya igwefoto mbugharị na-adịghị eji ntọala Huawei Hisilicon. Ele Sheen nwere ike izute ihe ị chọrọ.
Kedu ihe bụ Nkwado NDAA?
John S. McCain National Defense ikike (NDAA) bụ iwu gọọmentị etiti United States nke na-akọwapụta mmefu ego, mmefu na amụma nke Ngalaba Nchedo US. Maka afọ ụlọnga nke afọ 2019, Ngalaba NDAA 889, machibidoro gọọmentị US ị nweta ngwa vidiyo na nke nkwukọrịta sitere n'aka ụfọdụ ụlọ ọrụ China na ndị enyemaka ha.
Kpachara anya maka OEM ma ọ bụ Ngwa akụrụngwa
N'ihi na a na-akpọ ọtụtụ igwefoto na ngwa onyunyo ndị ọzọ na nzuzo (OEM) ọ nwere ike isiri anyị ike ịmara ma amachibidoro ngwaọrụ pụrụ iche, dabere na aha akara.
Abụọ ndị nrụpụta amachibidoro na ndepụta amachibidoro iwu bụ Hikvision na Dahua. Agbanyeghị, nke ọ bụla na-ere ọtụtụ OEM, ndị na-ede ngwaahịa ndị ahụ na aha aha ha.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ndozi na-ekwenye ekwenye na NDAA, ọ nwere ike ịchọ nyocha karịa ma gụnye ịjụ maka ihe amachibidoro iwu. Dịka ọmụmaatụ, Huawei bụ onye nrụpụta nke ihe dị na ndepụta amachibidoro iwu ma ha na-enye ọtụtụ ndị nrụpụta igwefoto mgbawa.
Lelee igwefoto kwekọrọ na Sheen, ejirila ihe ọ bụla n'ime ngwaahịa ndị a. Kpọtụrụ sales@viewsheen.com maka nkọwa.
Post oge: Dec-22-2020
Copyright - 2016-2021: All Rights echekwabara.